IXiaomi Mi 8 Pro kunye neMi 8 Lite zisungulwe eSpain | I-Androidsis
UXiaomi uye waba yenye yezona zinto zaziwayo kwilizwe lethu. Baye ngokusesikweni unyaka ngoku, kwaye ikhathalogu yabo yefowuni iyanda ngokuhamba kwexesha. Kulo nyaka uphawu luye lazisa iimodeli ezininzi kuluhlu lweMi 8. Ngoku, ukufika eSpain kweefowuni ezimbini ezintsha ezikolu luhlu kuyabhengezwa: IXiaomi Mi 8 Pro kunye neMi 8 Lite.
Iifowuni ezimbini Ziyathengiswa ngokusemthethweni eSpain. Baza kubhiyozela isikhumbuzo sokuqala somenzi kwilizwe lethu. Kwaye sele sazi amaxabiso ezi Xiaomi Mi 8 Lite kunye neMi 8 Pro.
IXiaomi Mi 8 Pro sisiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina, leyo ivelele ukuba inzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen. Imodeli esemgangathweni yesiphelo esiphakamileyo somenzi waseTshayina. Ukufika kwayo eSpain, iphehlelelwe kwinguqulelo enye ene-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi. Ixabiso layo lokuthengisa ngama-599 euros. Siza kukwazi ukuyithenga kwiivenkile zebhranti, kunye neendawo zokuthengisa ezisemthethweni.
Enye ifowuni yohlobo lwesiTshayina olusungulwe yiXiaomi Mi 8 Lite. Imodeli efikelela kwinqanaba eliphakathi kuluhlu lomenzi waseTshayina, kwaye iboniswa njengenye yezona ndlela zibalaseleyo kuluhlu lwazo. Ungajonga eyabo iinkcukacha ezipheleleyo kule khonkco. Esi sixhobo sikhutshwa kwiinguqulelo ezimbini.
Kwelinye icala sifumana uguqulelo olune-4/64 GB, olusungulwe ngokukodwa kwiTelefonica. Ixabiso lale nguqulo yesixhobo liya kuba ngama-euro angama-269. Ngelixa kwelinye icala sinenguqulo ene-6/128 GB, esinokuyithenga kuzo zonke iindawo eziqhelekileyo zeXiaomi, eya kuba nexabiso lama-euro angama-329. Iya kukhutshwa ngemibala emibini: I-Aurora Blue noBusuku obuMnyama.
Ngale fowuni zimbini, ikhathalogu yeemodeli zeXiaomi eSpain iyandiswa. Uphawu lwesiTshayina sele luyintengiso yesithathu ethengiswa kakhulu, kwaye ngokuqinisekileyo kwezi veki zidlulileyo zonyaka sibona ukuba intengiso yabo inyuka njani kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 8 Pro kunye neMi 8 Lite zifika eSpain
Isiqalisi ngokulula sika-Apollo. Isimahla, ngaphandle kwentengiso kwaye inkulu nakweyiphi na i-Android